Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Mihabetsaka ny tombom-barotra amin'ny hotely eran-tany, tsy any Eropa ihany » Page 2
Ny tahiry mahaliana any Etazonia dia tsy azo averina any Eropa, izay manohy ny fanelingelenana ataon'ireo fanidiana mifandraika amin'ny COVID any amin'ny firenena. RevPAR dia nijanona tao anaty fotaka tao anatin'ny iray volana, tsy nisy fanosehana mandroso na amin'ny fibodoana na amin'ny taha. Tamin'ny € 13.66, RevPAR dia nilatsaka 85% YOY.
Ny tsy fahampian'ny fidiram-bola fanampiny dia nanakana ny TRevPAR ary ny tsy fisian'ny fidiram-bola dia nampidina ny GOPPAR ho any amin'ny faritany ratsy mandritra ny volana fahadimy nisesy, - € 10.98.
Na eo aza ny fandaniana mijanona, ny tombom-barotra dia nahatratra -48.5%.
Ny APAC sy ny Moyen Orient dia mijanona amin'ny làlana
Tsy toa an'i Eropa, Asia-Pasifika sy Moyen Orient dia nanohy naneho pick up.
Ny volana febroary lasa teo no nahitan'ny APAC voalohany nilatsaka ny tampon'ny trano fandraisam-bahiny noho ny COVID-19 - izany no antony nanehoan'ny GOPPAR tamin'ity volana ity ny fanatsarana voalohany an'i YOY. Ny APAC dia nandrakitra ny volana fahasivy nisesy nahazoany tombony, na dia ny fitomboana ambany indrindra tamin'io fe-potoana io ihany tamin'ny $ 1.50.
RevPAR dia voarakitra ao amin'ny $ 38.25, izay nihena 16.4% YOY. Ny fibodoana dia nijanona mihoatra ny 30%, izay nisy hatramin'ny volana Jona lasa teo. Niakatra $ 6 ny tahan'ny tamin'ny volana lasa ka hatramin'ny $ 116.33.
Tahaka ny tombom-barotra, ny fidiram-bola tanteraka dia nihena tamin'ny volana febroary hatramin'ny ambaratonga ambany indrindra hatramin'ny volana Jolay lasa teo. Ny fihenan'ny TRevPAR, na eo aza ny fandaniam-bola tsy voatanisa, ao anatin'izany ny fihenan'ny mpiasa 17.9% ary ny fihenan'ny 14% amin'ny totalin-karama, dia niteraka ny isa GOPPAR efa nihena.
Ny fanarenana ny fizahan-tany ao Jamaika dia mila valiny sy fiaraha-miasa matanjaka amin'ny sehatra maro